version 0.6.4 – အဆိုပါ shoemaker ဖိနပ်မပါဘဲမရှိတော့ကြောင်း
အောက်တိုဘာလ 14, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု2comments
ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ Matt Mullenweg ထက်တခြားအဘယ်သူမှပူးပေါင်းနေကြတယ်, ထို WordPress ကိုပလက်ဖောင်း၏ဖန်ဆင်းရှင်.
အောက်ပါလုံးဝအတုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်, Matt ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးအသစ်သည်အဘယ်သို့နားလည်သဘောပေါက်ကူညီပေးပါမည် 0.6.4:
Ofer: Matt မင်္ဂလာပါ, ဒီနေ့ဘယ်လိုနေလဲ?
Matt: ငါအမှတ် ပတ်သက်. အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖူး 0.01 ရှေ့တော်၌အ plugin တစ်ခု၏ထုတ်ပြန်မှု!
Matt: ငါသည်သင်တို့ကိုနောက်ဆုံးမှာဒီလွှတ်ပေးရန်အတွက် wordpress ကို၏ဝိညာဉ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစား
Matt: ဟုတ်ကဲ့, သင်နောက်ဆုံးတွင်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပေါင်းစည်းအစားပတ်လည် hacking နေကြတယ်, ငါတကယ်သင်နောက်ဆုံးတွင်အချိန်ကို ယူ. ဘာသာပြန်ချက်များကိုသင့် plugin ကို interface ကိုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးစာမျက်နှာများကိုဖန်ဆင်းသည်ဟူသောအချက်နှင့်တူ, နှင့်သင်ကကောင်းပါတယ်ကတည်းက, အကယ်လို့အခမဲ့ဘလော့ဂ် get!
Ofer: ပေး, ကျေးဇူးတင်စကား! ယခုတွင်ငါသည်အခြားလူတို့သည်လည်းငါ့ plugin ကို၏ဘာသာပြန်ချက်များကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို?
Matt: အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်အသုံးပြုသူများကိုမေးမြန်း, ငါသည်သင်တို့ကိုသူတို့ကိုကရက်ဒစ်ပေးရပါလိမ့်မယ်သေချာဖြစ်ကြောင်းကို.
Ofer: သူတို့နှင့် ပတ်သက်. တပြင်လုံးကိုအရာကိုပြောပြပါ Poedit နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယ?
Matt: စလာသည်, အစဉ်မပြတ်ငါဟုပြောဆိုပါ၏အဖြစ်, သောကြောင့် plugin တစ်ခုရှိပါတယ်! ထိုအသင်ဟာသင်ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ထားသောနှင့်အချို့အသေးအဖွဲပြင်ဆင်ခြင်းများလှူဒါန်းခဲ့ပြီးကတည်းကသင်သိသင့်သည်.
Ofer: သင်ဆိုလိုတာ codestyling ဒေသခံ?
Matt: ဟုတ်ကဲ့, သောတင့်, မည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်တယ်. သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့အဘို့မေးခွန်းရှိသည်
Matt: ဟုတ်ကဲ့, အဘယ်ကြောင့်သင်တို့သည်အကျင့်ကိုကျင့်သောကြောင့် Transposh ကိုမသုံးခဲ့ပါ?
Ofer: တကယ်အကြောင်းရင်းမြင်ခဲ့ပြီမဟုတ်, အလွန်ကြီးစွာသော plugin ကိုအဘို့ပြီးသားရှိပါတယ်အဖြစ်, အဘယ်ကြောင့် replicator?
Matt: wordpress ကို၏ဝိညာဉ်, ဝေမျှခြင်း, ဂရုစိုက်တတ်တဲ့, ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်, နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ.
Ofer: ကျွန်မသေချာဒါကြောင့်မျှော်လင့်, ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းဘို့သင့်ကိုငါသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါ.
Matt: ကျေးဇူးတင်ပါသည်, နောက်တစ်ခါ, ဟာအဓိကအင်္ဂါရပ်ပေါ်မှာငါ့ကိုအင်တာဗျူးကျေးဇူးပြုပြီး, ငါသည်အ wordpress ကိုတိုင်းအသေးအဖွဲ plugin ကိုလွှတ်ပေးရန်အတုအင်တာဗျူးများလုပ်ဆောင်ခဲ့လျှင်, တကယ်တော့ wordpress ကိုတိုးတက်ရန်နှင့် wordcamps လာရန်အခမဲ့အချိန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှ.
Ofer: အသိပေးစာယူတော်မူမည်, ကျေးဇူးပါပဲ!
ကောင်းစွာ, ကျေးဇူးတင်စကား, Matt ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းကြများအတွက်, စဒီဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းတချို့ features တွေကိုလက်တင်ဘာသာပြန်ချက်ထည့်သွင်းထားသည် (google မှာဘာသာပြန်ချက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ), Bing မှထည့်သွင်းသစ်သုံးယောက်ဘာသာစကားများ translate. ဒါကြောင့်ပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်စေရှိရာ gettext ပေါင်းစည်းမှုကို disable လုပ်ဖို့စွမ်းရည်, အချို့သောအခြားပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်အတူ.
ထုံးစံအတိုင်း – ငါတို့သည်သင်တို့အဒီဗားရှင်းကိုခံစားရပေလိမ့်မည်မျှော်လင့်
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ, အတုအင်တာဗျူးများ, gettext, ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်, Matt Mullenweg, အသေးအဖွဲ, ပိုဘာသာစကားများ, လွှတ်ပေး
အောက်တိုဘာလ 18, 2010 တွင် 2:08 နံနက်
အတုအင်တာဗျူးများကြီးမြတ်, အထူးသဖြင့်အသေးအဖွဲကိုမသိကျိုးကျွံအစာရှောင်စာဖတ်သူတွေအတွက် “အတုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း” ဖတ်နေမတိုင်မီသတိပြုပါ😉
သင်ယခု plugin ကိုဖန်တီးသူ Transposh နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ plugins ကိုဘာသာပြန်ဆိုဖို့ခွင့်ပြုပါနဲ့?
အောက်တိုဘာလ 18, 2010 တွင် 2:14 နံနက်
သင့်ရဲ့မေးခွန်းကို, မလုပ်ပါနှင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုမကျင့်, က codestyling ဒေသခံ plugin ကိုဘာလုပ်တယ်င်, သို့သော် – ငါတို့သည်ယခုအသုံးပြုသူများကျွန်တော်တို့ရဲ့ plugin ကိုဘာသာပြန်ဆိုဖို့ခွင့်ပြု